I-TxTFi: Nika amandla ukuThengwa kwakhona kweVenkile yokuGqithisela uMyalezo oThunyelwe | Martech Zone
Uku-odola kwakhona ngokuzenzekelayo umyalezo wegama ayibizi kakhulu kwaye isebenza ngakumbi ekufumaneni iodolo yesibini okanye yesithathu kwisiseko esikhoyo sabathengi bakho. Sika yonke ingxolo-vumela abathengi bakho baodole apho kwaye baziva bekhululeke ngakumbi. Kunye TxTFi kuba Shopify, awunyanzelekanga ukuba wenze nantoni na. Zonke zizenzekelayo. Misela nje kwaye ulibale.
Imiyalelo yeSMS yeShopify
TxTFi Iiplagi kwi-Shopify ngokuzenzekelayo kwaye ifikelela kubathengi bakho ngomyalezo obhaliweyo ozenzekelayo ukuze unikezele ngesicelo esifanelekileyo soku-odola kwakhona, konke ngomyalezo obhaliweyo. Emva koko, umthengi wakho unokwenza iodolo yakhe kwaye ongeze izinto kuloo ncoko yomyalezo obhaliweyo.
Nje ukuba igqityiwe, TxTFi ivelisa ikhonkco ukuvumela abathengi ukuba baye ngqo kwiphepha lakho le-Shopify lokuphuma. Konke umthengi ekufuneka ekwenzile kukuhlawula ngokupheleleyo-yiyo loo nto. Zonke iintlawulo kunye neenkqubo zoku-odola ziyaqhubeka nokusebenza njengoko zisenza ngoku.
Iimpawu ze-TxTFi ze-SMS kunye neeNzuzo
Iselfowuni kuphela -Bathengi bahlala behamba. Uku-odola okubhaliweyo kwenza kube lula, kukhawuleze, kube lula kubo, nakuwe
Zizenzekelayo ngokuzenzekelayo - I-TXTFi Bot inxibelelana ngokupheleleyo nomthengi wakho-iyazenzekelayo, akukho sikhokelo okanye ulwalathiso olufunekayo.
izikhumbuzo Ukungena ngokuzenzekelayo kubathengi abangaphenduliyo; ivumela abathengi ukuba babe nakho ukuseta ukulandelelana.
Myalelo weMveliso emininziI-s-TXTFi Bot inokuphatha ngokulula enye okanye iimveliso ezininzi ngokulandelelana.
Imiyalezo ekujoliswe kuyo -Cinezela ngokuzenzekelayo ngokusekwe kuludwe, imirhumo, ukuphuma.
Ukuphuma ngokulula -I-TXTFi isebenzisa ukuphuma kwakho kwe-Shopify, ngaphambi kokugcwalisa zonke iinkcukacha. Abathengi baqinisekisa nje intlawulo.
Ukubhengezwa: Siyinxalenye ye I-TXTFi.
tags: Ivenkile yokuthengisaii-odolo zombhalo eziphathwayoHlela kwakhonathengasms ezorhweboUku-odola ii-smsumyalezo wegamatxtfi
Iziko lokuKhetha i-imeyile kunye namaphepha okuBhalisa: Sebenzisa iiNdima vs. uPapasho